Kamuva, ukungenisa nokukhipha insimbi ezweni lami kungakhombisa iphethini "ephakeme kabili" - China Foshan Hermes Steel
Kamuva, ukungenisa nokukhipha insimbi ezweni lami kungakhombisa iphethini "ephindwe kabili"
Ngokwezibalo zakamuva ezivela kwaGeneral Administration of Customs, izwe lami lithumele amathani wensimbi ayizigidi eziyi-7.542 ngoMashi, ukwanda konyaka nonyaka ngo-16.5%; futhi kwangeniswa amathani wensimbi ayizigidi eziyi-1.322, ukwanda konyaka nonyaka ngama-16.3%. Ezinyangeni ezintathu zokuqala, izwe lami lathumela ngaphandle amathani ayizigidi eziyi-17.682 emikhiqizo yensimbi, ukwanda konyaka nonyaka ngama-23.8%; ukungeniswa okwenyuka kwemikhiqizo yensimbi bekungamathani ayizigidi ezingama-3.718, ukwanda konyaka nonyaka ngo-17.0%.
Okunye okukhathaza kakhulu ukuthi ukuthunyelwa kwensimbi ezweni lami ngoMashi kukhuphuke ngamathani ayizigidi ezingama-2.658 uma kuqhathaniswa noFebhuwari, okuwukukhuphuka kwama-54.4%, okwenza kube nokukhishwa kwensimbi okuphezulu njalo ngenyanga kusukela ngo-Ephreli 2017.
Ngokubona kombhali, ngokutholakala kwempahla yezwe lami ethunyelwa ngaphandle, ukungeniswa kwensimbi ezweni lami nokuthekelisa kungakhombisa iphethini "ephakeme kabili" esikhathini esizayo. “Okuphakeme kakhulu kuqala” kubonakala ngevolumu: inani eliphelele lokungeniswa kwensimbi nokuthunyelwa kwelinye izwe lizohlala ezingeni eliphakeme; “okwesibili okuphezulu” kubonakala ezingeni lokukhula, futhi ukungeniswa kwensimbi kanye nokuthunyelwa kwamanye amazwe kuzogcina izinga lokukhula eliphakeme kakhulu unyaka wonke. Izizathu eziyinhloko zimi kanje:
Okokuqala, ngaphansi kwesizinda senani eliphakeme lekhabhoni nokungathathi hlangothi kwekhabhoni, izifunda ezinkulu zezwe lami ezikhiqiza insimbi ziye zahlehlisa izinqubomgomo zokuvikela ezemvelo ezinengcindezi ephezulu, okuholele ekwehlisweni okunezigaba kokuphakelwa kwemikhiqizo yensimbi eyinhloko njengama-billets nensimbi yensimbi. Ngaphansi kwalesi simo, imikhiqizo yensimbi eyinhloko yaphesheya yagcwala emakethe yasekhaya. Lokhu kungabonakala kusukela ekuthunyelweni kwamuva okukhulu kwamabhilidi wensimbi aseVietnam aya eChina.
Umuntu ofanele ophethe inhlangano yezimboni phambilini waveza ukuthi kukhuthaza ukwanda kokungeniswa kwemikhiqizo eyinhloko njengamabhilidi wensimbi futhi kudlala indima ephelele endimeni yemakethe yokungenisa ekuqinisekiseni ukutholakala kwemakethe yasekhaya. Umbhali ukholelwa ukuthi ukungeniswa kwemikhiqizo yensimbi eyinhloko kuzokwenziwa okujwayelekile ngokuzayo, okuzoqhubeka nokukhuthaza ukukhula kokungeniswa kwensimbi okuphelele ezweni lami.
Okwesibili, umehluko wentengo phakathi kwezimakethe ezifuywayo nezangaphandle unikeza izimo ezikahle zokuthekelisa kwensimbi yasekhaya. Ngokutholakala kwesidingo ezimakethe zaphesheya kwezilwandle, izintengo zensimbi zamazwe omhlaba zikhuphuke kakhulu, futhi igebe lentengo ngemikhiqizo yensimbi yasekhaya liye landa kakhulu. Thatha i-HRC njengesibonelo. Njengamanje, intengo ejwayelekile ye-HRC emakethe yase-US ifinyelele ku-US $ 1,460 / ton, okulingana no-RMB 9,530 / ton, kuyilapho intengo ye-HRC yasekhaya icishe ibe yi-Yuan / ton engama-5 500 kuphela. Ngenxa yalokhu, ukuthekelisa insimbi kunenzuzo enkulu. Umbhali ubikezela ukuthi izinkampani zensimbi zizosheshisa ukuhlelwa kwama-oda wokuthekelisa esikhathini esizayo, futhi umthamo wokuthekelisa wemikhiqizo yensimbi uzohlala uphakeme esikhathini esifushane.
Njengamanje, into enkulu engaqinisekile ukulungiswa kwenqubomgomo yesaphulelo sentela yokuthumela impahla ngaphandle. Lapho le nqubomgomo izosetshenziswa okwamanje ayinqunywa. Kodwa-ke, umbhali ukholelwa ukuthi akunakwenzeka ukuthi isaphulelo sentela yokuthumela impahla ngaphandle kwensimbi "sizosulwa" ngqo, kepha "ukulungiswa kahle" kusuka ku-13% wamanje kuya cishe ku-10% kungaba umcimbi omkhulu wamathuba.
Ngokuzayo, ukwakheka kwemikhiqizo yokuthekelisa yensimbi yasekhaya kuzosondela emikhiqizweni enenani eliphakeme, futhi ukuthunyelwa kwensimbi kuzongena esigabeni se "highs ezintathu" se "high quality, high value added, and high volume" ukuvala umthelela wezindleko kokulungiswa kwezinga lentela.
Ikakhulu, inani lokuthumela ngaphandle kwemikhiqizo yensimbi ekhethekile lizoqhubeka nokukhuphuka. Imininingwane ikhombisa ukuthi kumathani wensimbi ayizigidi ezingama-53.68 akhishwe yizwe lami ngonyaka wezi-2020, imigoqo nezintambo kwakungu-12.9%, ama-engeli nezinsimbi zesigaba kwakungu-4.9%, amapuleti angu-61.9%, amapayipi angu-13.4%, nenye insimbi izinhlobo zifinyelele ku-ratio efinyelele ku-6.9%. Kulokhu, u-32.4% ungowensimbi ekhethekile. Umbhali ubikezela ukuthi ngokuzayo, ngaphansi kwethonya lokulungiswa kwenqubomgomo yesaphulelo sentela yokuthumela kwamanye amazwe, inani lemikhiqizo yensimbi ekhethekile ethunyelwa kwamanye amazwe lizoqhubeka lenyuka.
Ngokunjalo, ukungeniswa kwensimbi kuzokhombisa iphethini "yokwanda okusheshayo kwesilinganiso semikhiqizo eyinhloko engeniswa ngaphakathi kanye nokwanda okuqinile kokungeniswa kwensimbi ephezulu". Njengoba ucwaningo lwasekhaya kanye nokuthuthukiswa kwensimbi esezingeni eliphakeme kuqhubeka nokwanda, inani lensimbi ephezulu ephezulu engenisiwe ingeniswa ezweni. Izinkampani zensimbi yasekhaya kufanele zikulungiselele ngokugcwele lokhu, zithuthukise ukwakheka komkhiqizo ngesikhathi, futhi zifune amathuba entuthuko ekuguqukeni kwephethini yokuhwebelana nokungenisa nokuthekelisa.